सिम्रिकले भित्र्यायो अत्याधुनिक हेलिकोप्टर, २३ हजार फिटसम्म उडान, मूल्य २६ करोड
Published: November 3, 2015 15:10 PM
काठमाडौं, कार्तिक १७ । निजी वायुसेवा कम्पनी सिम्रिक एअर प्रालिले अत्याधुनिक हेलिकोप्टर मंगलबार काठमाडौं भित्र्याएको छ ।फ्रान्सेली कम्पनी एअरबस हेलिकोप्टरर्सद्वारा निर्मित यो हेलिकोप्टरमा पाइलटबाहेक अरु ६ जना बस्न मिल्ने छ ।२३ हजार फिटसम्म सहजै उडान भर्न सक्ने यो हेलिकप्टरको सहयोगमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका...
‘वर्डक्याम्प नेपाल २०१५’ आयोजना हुने
Published: November 2, 2015 08:47 AM
काठमाडौं,कार्तिक १६ । । संसारको प्रख्यात वेबसाइट बनाउने र सित्तैमा पाइने (सफ्टवेर ‘वर्डप्रेस सम्वन्धि एक दिने सेमिनार कार्यक्रम ‘वर्ड क्याम्प नेपाल २०१५’ को आयोजना आगामी मंसिर ५ गते आइतबार (नोभेम्बर २१) का दिन हुने भएको छ । वर्डक्याम्प विश्वव्यापी रुपमा आयोजना हुने अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम हो । सन् २०१२ देखि नेपालका वर्डप्रेस प्रयोगकर्ता तथा सफ्टवेयर...
गूगलले पृथ्वीको कक्ष परिक्रमा गर्ने क्षमताको इन्टरनेट बेलून छाड्ने
Published: October 29, 2015 08:52 AM
काठमाडौं, कार्तिक १२ । इन्टरनेट सर्च इन्जिन गूगलले आउँदो वर्ष पृथ्वीको कक्षमा परिक्रमा गर्ने क्षमतासहितको इन्टरनेट बेलून छाड्ने भएको छ । बीबीसीका अनुसार पृथ्वीवासीलाई उच्चस्तरीय क्षमतासहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन गूगलले यो तयारी गरेको हो । आकाशमा विचरण गर्न गूगलले छाड्ने...
Published: October 18, 2015 09:29 AM
काठमाडौं, कार्तिक १ । आजकल फेसनको रुपमा रहेको मोबाइलको सेल्फीले थुप्रैको मृत्यु भएको छ । सन् २०१४ मा मात्रै बिश्वका बिभिन्न राष्ट्रमा जोखिमपूर्ण स्थानमा सेल्फी लिने क्रममा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । रुसको पर्वत इलाकामा ह्याण्ड गे्रनेड नष्ट गर्ने क्रममा सेल्फी लिएका दर्जनौंमा केही घाइते भए भने मस्कोको एक पुलमा चढी...
सगुन डटकमले नयाँ भर्सन ल्याउने, सयौं नेपालीलाई रोजगारी दिने योजना
Published: October 17, 2015 10:38 AM
काठमाडौं, असोज ३० । अमेरिकामा रहेका नेपाली युवा गोविन्द गिरीको अगुवाइमा केही महिना अघि सार्वजनिक भएको सगुन एप्लिकेशन नामक सामाजिक सञ्जालले नयाँ भर्सन ल्याउने तयारी थालेको छ । सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरी, कबिन्द्र सिटौंला लगायतको टोली नेपाल भर्खरै नेपाल आएर पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार आगामी नोभेम्बर...
फेसबुकमा आफैं भिडियो ‘प्ले’ भएर हैरान हुनुभएको छ ? छ भने यसो गर्नुस्
Published: October 5, 2015 13:25 PM
काठमाडौं, असोज १८ । अचेल फेसबुकमा विभिन्न प्रकारका भिडियो बग्रेल्ती देखिन्छन् । तपाईको टाइमलाइनमा रहेका ती भिडियोहरु चाहेर वा नचाहेर हेर्नैपर्ने बाध्यता पनि हुने गरेको छ । किनकी ‘कर्सर’ पुग्नासाथ ती भिडियो आफैं प्रशारण हुन थाल्छन् । धेरैजसोलाई यो फिचर मन पर्न छाडेको छ । किनकी भिडियो प्रशारण हुनासाथ केही...
‘इ–कमर्स संचालकहरुले उपभोक्ताहरुको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ’
Published: October 5, 2015 10:41 AM
काठमाडौं, असोज १८ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ)ले सुरु गरेको आइटी सम्वन्धी कार्यक्रम ‘आइटी टेक टक’ अन्तर्गत पहिलो श्रृंखला सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको पहिलो श्रृंखला अन्तर्गत ‘नेपालमा इ–कमर्सको अवस्था’ का वारेमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । नेपालमा इ–कमर्सको...
विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गर्दै र्‍याली
Published: September 29, 2015 13:06 PM
काठमाडौं, असोज १२ । ‘विद्युतीय परिवहन हाम्रो भविश्य’ भन्ने नाराका साथ सोमबार राजधानीमा नेपाल विद्युतीय परिवन संघले विद्युतीय परिवहन र्‍याली निकालेको छ । सुन्धाराबाट प्लेकार्ड, ब्यानरसहित निकालिएको र्‍यालीले राजधानीका बिभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो । नेपालमा...
एनसेलले ल्यायो ‘एनसेल एप संसार’
Published: September 24, 2015 19:34 PM
काठमाडौं, असोज ७ । निजी क्षेत्रको अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाली मोबाइल एपको वितरणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले आफ्नै एप स्टोर ‘एनसेल एप संसार’ सन्चालनमा ल्याएको छ ।उक्त स्टोरमार्फत् एनसेलका सम्पूर्ण ग्राहकले अब एकै ठाउँबाट प्रचलित नेपाली मोबाइल एप निःशुल्क डाउनलोड गरी सुविधा उपभोग गर्न सक्ने कम्पनीले...
फेसबुकमा अब ‘डिसलाइक’ पनि
Published: September 16, 2015 07:32 AM
काठमाडौं, भदौ ३० । विश्वमै लोकप्रिय मानिएको सामाजिक संजाल ‘फेसबुक’ ले प्रयोगकर्ताहरुको मागलाई ध्यानमा राख्दै ‘डिसलाइक’ बटन उपलब्ध गराउने भएको छ । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । क्यालिफोर्नियास्थित फेसबुक मूख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ३१ वर्षीय जुकरबर्गले...
अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउनेको नयाँ रेकर्ड बन्यो
Published: September 12, 2015 18:01 PM
काठमाडौं, भदौ २६ । रुसी अन्तरिक्ष यात्री गेनाडी पाडल्काले अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् ।आफ्नो पाँंचौ अन्तरिक्ष यात्रामा पाडल्काले १ सय ६८ दिन बिताएका थिए । योसँगै उनले कुल ८ सय ७९ दिन अन्तरिक्षमा बिताएर नया रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।सन् २००५ मा रुसी अन्तरिक्ष यात्री सर्गेइ क्रिकालेभले ६ पटकसम्मको...
सावधान ! यसरी तपाईको मोबाइल ‘लक’ हुन सक्छ
Published: September 8, 2015 11:38 AM
काठमाडौं, भदौ २२ । अमेरिकी सुरक्षा कम्पनी ‘जेडस्केलर’ ले एउटा यस्तो एन्ड्रोयड एप्लिकेशनबाट सावधान तुल्याएको छ जसले प्रयोगकर्ताबाट रकम असुली गरिरहेको छ । ‘एडल्ट प्लेयर’ नामको उक्त एपले पोर्न सामग्री उपलब्ध गराउँछ । यसलाई ‘प्ले’ गर्नासाथ मोबाइलको फ्रन्ट क्यामेराले प्रयोगकर्ताको...
सामाजिक सञ्जाल मार्फत सद्भाव भड्काउनेलाई कारवाही गरिने
Published: September 1, 2015 10:29 AM
बर्दिया, भदौ १५ । चितवन देखि कञ्चनपुर सम्म थरुहट राज्यको माग गर्दै गरिएको वन्द २२ औं दिन पुगेको छ । निषेधित क्षेत्र भएका ठाउँहरुमा पसलहरु खुलेपनि यातायात, कलकारखाना ठप्प छन् । सरकारसँग वार्ताको कुरामै सहमती नभएपछि वन्द झन लम्बिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले गुलरिया...
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई सुबिसुको एक एमबीपीएस इन्टरनेट र क्लियर टिभी सेवा
Published: August 19, 2015 18:43 PM
काठमाडौं, भदौ २ । सुबिसु केबलनेट प्रालिले नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरुलाई सम्मानस्वरुप इन्टरनेट तथा नेपालको पहिलो डिजिटल केवल टिभी सेवा प्रदान गरेको छ ।बुधबार राजधानीमा कार्यक्रम गर्दै सुबिसुले प्रत्येक राष्ट्रिय खेलाडीलाई एक एमबीपीएस अनलिमिटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र क्लियर टिभीको प्रिमियम प्याकेज प्रदान गरेको हो ।...
लामखुट्टे र कुकुर भगाउन मोबाइल एप
Published: August 18, 2015 07:53 AM
काठमाडौं, भदौ १ । तपाईलाई लामखुट्टे वा कुकुरले तनाव दिइरहेको छ ? छ भने धन्दा नमान्नुस्, एउटा मोबाइल एपले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ । लामखुट्टेबाट जोगिनका लागि केमिकलयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्दा मानिसमा त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ पनि हुन सक्छ । तर यो एपले कुनै ‘साइड इफेक्ट’ विना तपाईलाई लामखुट्टे र...